“Neymar Kama Ciyaari Doono Koox Ay Ka Tirsanyihiin Midkood Messi Ama Ronaldo”
HomeAfricaWararka Somaliga Ah“Neymar Kama Ciyaari Doono Koox Ay Ka Tirsanyihiin Midkood Messi Ama Ronaldo”
Pini Zahavi oo ah wakiil ku lug lahaa heshiiskii uu ciyaaryahanka ugu qaalisan dunida Neymar ku yimid Paris Saint-Germain ayaa ka hadlay hamiga laacibka Brazil ee ku aadan u dhaqaaqista koox cusub.
Wakiil Zahavi oo matala weeraryahanka kooxda Bayern Munich Robert Lewandowski oo wareysi siinayay jaraa’id ka soo baxa dalka Poland ayaa qiray in Neymar uu qorsheynayo deegaan cusub, laakiin waxa uu sheegay in uu si wanaagsan uga fiirsan kooxdiisa xigta marka uu ka guuro caasimada France.
“Neymar waxa uu awoodaa in uu sameeyo sida Messi iyo Ronaldo oo kale,kama ciyaari doono koox ay ku suganyihiin” ayuu yiri Zahavi oo wareysi siinayay Przeglad Sportowy.
“Markii uu joogay Barcelona, Neymar waxa uu ahaa mar walba midka labaad,dhana tuurista gool ku laadka, laadka xorta ah iyo dhan walba”
74 Jirka ka soo jeeda Israel ayaa tilmaamay in laacibka ugu qaalisan kubada cagta in xili ciyaareedka soo aadan uu PSG baaqi ku sii ahaan doono waxaana uu ka hadlay muhiimada uu xidigaasi u leeyahay kooxda hogaamineysa horyaalka France.
“Waxa uu yimid Spain isagoo da’yar ah, halkaasi ayuu ku qaatay waqti dahabi ah, hada waa 26 jir ugu yaraan 8 ama 9 sano oo heer sare ah ayaa ku hartay cagihiisa oo uu sii ciyaari karaa”.
“Waxa uu doonayaa xornimo, kooxdiisa PSG waxay leedahay qorshayaal waaweyn,ka hor intii Neymar uusan tagin caasimada France ma jirin laacib weyn oo halkaasi uga horeeyay”.
Wakiil Zahavi oo dhex dhexaadinaya qorshaha Lewandowski iyo Real Madrid ayaa ku lug lahaa kala wareejinta ciyaartooyda tan iyo sanadkii 1979,waana mid kamid wakiilada sumcada ku leh yurub iyo guud ahaan kubada cagta.
Waxa uu wakiil horay ugu soo noqday difaacii hore ee Reds Rio Ferdinand sidoo kale iibkii Chelsea ee Roma Abrahmovich ayuu ku soo lug yeeshay.